Monday, September 10, 2007 Thursday, June 11, 2015 Douglas Karr
Ezigbo enyi, Pat Coyle, jụrụ, Gini bụ Azụmaahịa Azụ?
Wikipedia nwere nkọwa ndị a:
Mkparịta ụka mmekọrịta na-ezo aka na-agbanwe agbanwe na azụmaahịa ebe azụmaahịa si na azụmahịa gbadoro ụkwụ na mkparịta ụka. Nkọwa nke mmekọrịta mmekọrịta sitere n'aka John Deighton na Harvard, onye kwuru na ahịa mmekọrịta bụ ikike ịgwa ndị ahịa okwu, cheta ihe ndị ahịa kwuru ma gwa onye ahịa ahụ ọzọ n'ụzọ na-egosi na anyị na-echeta ihe ndị ahịa gwara anyị (Deighton 1996).
Azụmahịa mmekọrịta abụghị otu na ntanetị n'ịntanetị, ọ bụ ezie na usoro ịzụ ahịa mmekọrịta na-arụ ọrụ site na teknụzụ ịntanetị. Ikike icheta ihe onye ahịa kwuru ekwuwo ka ọ dị mfe mgbe anyị nwere ike ịnakọta ozi ndị ahịa na ntanetị ma anyị nwere ike ịkpọtụrụ onye ahịa anyị ngwa ngwa site na iji ọsọ nke ịntanetị. Amazon.com bụ ihe atụ magburu onwe ya nke iji mmekọrịta mmekọrịta, ebe ndị ahịa na-edekọ ihe ha chọrọ ma gosipụta nhọrọ akwụkwọ dabara na ọ bụghị naanị ihe ha masịrị kamakwa ịzụrụ ihe n'oge na-adịbeghị anya.
Ọtụtụ ọnwa gara aga, mmadụ jụrụ m ihe dị iche na mgbasa ozi na ịzụ ahịa. M zaghachiri na ihe atụ nke ịkụ azụ, itinye na mgbasa ozi bụ ihe omume ma ọ bụ ọkara, mana ahịa bụ atụmatụ ahụ. N'ihe gbasara ịkụ azụ, enwere m ike ijide osisi ma merie ọdọ mmiri taa wee hụ ihe m jidere. Nke ahụ bụ mgbasa ozi… na-efegharị idide ma hụ onye na-ata ata. N'aka nke ọzọ, ịzụ ahịa bụ ọkachamara n'ịkụ azụ nke na-enyocha azụ, nri azụ̀, ọnọdụ okpomọkụ, ihu igwe, oge, mmiri, omimi, wdg. azụ site na-ewu atụmatụ.
Mgbasa ozi ka bụ akụkụ nke atụmatụ ahụ, ọ bụ naanị ihe omume nwere ọgụgụ isi ma ọ bụ ọkara n'ime ya.
N'afọ ndị gafere, ma mgbasa ozi na ịre ahịa bụ ihe na-enweghị isi. Ngalaba ahia ma ọ bụ mgbasa ozi gwara anyị ihe anyị ga-eche na ha achọghị ịma ihe mmeghachi omume anyị bụ. Ha na-achịkwa ozi, usoro, ngwaahịa na ọnụahịa. Naanị 'olu' anyị bụ ma anyị azụtara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ.
IMHO, Azụmahịa mmekọrịta bụ mmalite nke ahịa ebe ndị ahịa nyere ikike, nyefee ya, ma kpọbata ha iji nyere aka na atụmatụ ahụ. Cheedị ma ọ bụrụ na anyị nwere ohere ịgwa azụ ahụ ma hụ ụdị ọnyà ha na-amasị ha na mgbe ha ga-achọ iri nri. Ikekwe anyị ga-atụfu ụfọdụ ihe dị mma na ọdọ mmiri ka ha wee rata ndị enyi ha ka ha soro ha rie nri oge ọzọ. (Otutu n'ime anyi achoghi igba ogwu ma zoputa ndi ahia anyi - mana inwetara isi okwu.)
Anyi enwekwaghi ike ijide ozi anyi ma obu akara anyi. Anyị na ndị ahịa na-ekerịta njikwa ahụ. Onye ahịa ahụ, ọ bụ ezie na onye ahịa nwere obi ụtọ ma ọ bụ onye iwe, na-aga iji ngwaọrụ dịka tontanetị ịgwa ndị enyi ya gbasara ahụmịhe ha na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Dị ka ndị na-ere ahịa, anyị kwesịrị ijide n'aka na anyị nwere ike ịbụ akụkụ nke mkparịta ụka ahụ ma nyekwa ụlọ ọrụ anyị echiche na echiche ha.
Ikekwe otu ihe atụ ga-abụ nyocha nke ndị ọrụ n'oge gara aga na Nnyocha ogo 360 nke taa. N'otu oge na ọrụ anyị, anyị ga-eji nwayọ chere ịnata nyocha anyị. Nyochaa ga-ebuli anyị elu ma nye ebumnuche, otito na nkatọ na anyị ga-aza ajụjụ rue nyocha anyị ọzọ. Nyocha nke 360 ​​dị iche iche… ebumnuche, otito na nkatọ na-atụle ma dee site n'akụkụ abụọ nke tebụl. A kọwapụtara onye ọrụ na ọganiihu yana ihe ịga nke ọma ya na njikwa na onye ndu nke onye njikwa ma ọ bụ onye nlekọta - mana akọwapụtaghị ya naanị.
Ndị ụlọ ọrụ achọpụtala nyocha 360 dị oke mma maka na ọ na - enyere onye njikwa aka ịbụ onye ndu kachasị mma yana inye ha nghọta iji soro onye ọrụ ahụ rụọ ọrụ. (Onweghi ndi oru abuo yiri - dika otutu ndi ahia abuo!). Mkpakọrịta mmekọrịta adịghị iche. Site na ịwulite atụmatụ dị iche iche nke gụnyere olu ndị ahịa anyị ma tinye ya n'ọrụ, anyị nwere ike ịkwalite ahịa anyị ruru nke ọma.
Ebe m na-asụ ngọngọ na mmekọrịta mmekọrịta bụ na enwere n'ụzọ ụfọdụ 'oge na oge' na ọ bịara nwee ike. Nkọwa Wikipedia na-amasị m n'ihi na ọ na-egosi na ọ ekwesịghị ịbụ an online atụmatụ. Ekwenyere m na ejirila mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta nke ọma n'ọtụtụ ndị na-ajụ ase ruo oge ụfọdụ. Onwe m ekwetaghị na ọ bụ ihe ịntanetị. Kedụ ka esi enweta nyocha ozigbo dị iche na nyocha email? Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ jiri data ahụ natara iji jeere ndị ahịa ya ozi ma ọ bụ dọta ndị ọhụrụ, ekwenyere m na nke ahụ dị ka mmekọrịta dị ka netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta n'ịntanetị.
Onye nkwado: Tinye Ihe Ndị Na - emeri nke ụfọdụ Nkwalite Email 350,000 na Email Gị Marketing
Na Lelee nsonaazụ gị na-arị elu naanị na ụbọchị 3. Pịa ebe a!
Tags: definitionmmekọrịta mmekọrịtangwa ngwa
Ọrụ gị ọ na-arụ ọrụ gị? Olee otú ọtụtụ ndị were n'ọrụ?
Jun 6, 2009 na 4: 47 PM
Nke a bụ eziokwu… saịtị ole na ole n'eziokwu. Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ ji na-ele anya na mgbasa ozi mmekọrịta iji dozie nsogbu ahụ. Ọ bụ nchebe 'ebe nke atọ'. Ekwetaghị m na ụlọ ọrụ kwesịrị ịga nke ọma na netwọk mmekọrịta ha - anyị ahụla na ọ ga-ada. Ekwenyere m na ha kwesiri ime mkparita uka na ibe ha.
Daalụ maka ịgbakwunye na mkparịta ụka a!
Ọkt 7, 2013 na 8:45 AM
ọ ga-amasị m iwebata ụlọ ọrụ mmekọrịta m na mmekọrịta m. ya mere Douglas biko a ga m enwe ekele ma ọ bụrụ na ị gosi m etu esi amalite… ..?
Jun 29, 2010 na 11:37 AM
Ndewo Doug… gị quote: “Mgbasa ozi bụ ihe omume ma ọ bụ ọkara, ma ahịa bụ atụmatụ” anyị nwere ike ikwu Marketing bụ atụmatụ na Mgbasa ozi bụ ngwa nke ya ?? 🙂